Zvakanakira zvokuimba ruoko Anoumba muchina - China Longkou Fushi Apex
Food Container Vacuum Achigadzira Machine
FS-YTA1100 / 1400 Robot Arm Vacuum Achigadzira Kucheka kuisira Machine
FS-YTA100 / 1100 Vacuum Achigadzira Kucheka kuisira Machine
FS-YTA600 / 1000 Vacuum Achigadzira Kucheka kuisira Machine
FS-YT600 / 1000 Vacuum Achigadzira Kucheka Slicing Machine
Seedling tireyi Machine
Foam tireyi Vacuum Achigadzira Machine
Fruit Washing à Grading Machine
Zvakanakira zvokuimba ruoko Anoumba muchina
A dvantages ose zvokuimba ruoko Anoumba muchina
Achigadzira nzvimbo iri hombe. Inobudirira vanoumba nzvimbo iri 1100 × 1400mm, ndiyo 1,4 nguva yakakura kupfuura zvetsika muchina, unogona kurongwa mabhokisi zvakawanda. Kufunga kuti chinyakare muenzaniso chakuvhuvhu anogona kuronga mabhokisi 20, mabhokisi 28 zvokuimba muenzaniso chakuvhuvhu dzinogona kurongwa.
Production kumhanya ndiko kutsanya. Hita bhokisi kuparadzanisa migove mitatu, hydraulic nokuveza kumhanya ari kufamba, uye kushandisa zvemaziso maoko kuti muchayamwa zvigadzirwa, kupfuura nzira dzose kuderedza nokushanda yose nguva.
⑴ Heating bhokisi zvachose kureba 4.4m, panongova kutambanudza kudziyisa nguva, tichidzivisa pamusoro soro tembiricha uchanyauka jira, panguva iyoyowo kuita nani yechipiri achipupuma furo maturo.
⑵ Hydraulic humburumbira iri hombe. Traditional muenzaniso hydraulic humburumbira akaberekera ndiyo 160mm, apo ari zvokuimba muenzaniso wacho 220mm, kuonana nharaunda kuwedzera 1 nguva, kumanikidzwa pamusoro Unit nzvimbo zvinoderedza, saka kuti kuwedzera upenyu hwayo. Zvichakadai, vanotadzisa hydraulic edunhu uye solenoid vharafu kuderera, kuwedzera upenyu hwavo zvakare.
⑶ Mechanical ruoko wemagazini zvinhu kumativi ose, izvo achaponesa chinyakare womuenzaniso wacho conveyor bhandi goho nguva, kuwedzera kugadzirwa nokukurumidza yose.
Zvokuimba ruoko womuenzaniso kugadzirwa nokukurumidza inogona kusvika 18-22cycles / Maminitsi, awa imwe neimwe inogona kubereka 33000-37000pcs zvemasikati bhokisi. Kunyange zvazvo tsika womuenzaniso kugadzirwa kumhanya ndiko 12-15cycles / Maminitsi, kureva awa rimwe anogona kubereka 12000-18000pcs, chete nehafu kunyatsoshanda ari zvokuimba ruoko womuenzaniso.
Kumucheto zvinhu pakati maviri bhokisi riri chinyakare womuenzaniso muforoma ane zvinenge 2cm, apo ari mutsva zvokuimba ruoko womuenzaniso haasi pamusoro 1cm. Izvi kuderedza zvikuru tsvina zvinhu, kuti zvimwe rakapera zvigadzirwa.
Ponesai manpower, uye kuderedza mutengo. The mhando mbiri vanoshandisa manpower chete, vanoda 3 vashandi / kusuduruka, saka shandisa itsva zvokuimba ruoko womuenzaniso aigona kuderedza mutengo, zvichiita zvakawanda zvisingabatsiri.
Dzinomwisa uye kudhonza zvokudya mumidziyo kumusoro. Kunyange mumidziyo regai vakanwa kubva zvinobudirira, ichi hakumbokanganisi inotevera kufamba.
Kucheka nzvimbo inogona kufamba: rinosundwa injini, izvozvo kunobatsira achichinja achitanga uye anogona kuponesa nguva kuchinja anoumba.
Electrostatic eliminators pavanopfuta kutema nzvimbo, uye kuchengetwa nharaunda, zvinogona kubvisa kunofambira mberi akabudiswa munguva dzichiumbwa muitiro. Dai chokwadi pangozi producting.
Nhungamiri njanji wakaumbwa Stainless simbi, yakasimba kupfuura aruminiyamu gwaro njanji
Post nguva: Jul-12-2018
May 1st, 2011, China rakabvisa pakati fo ...